သူမရဲ့ နာမညျနဲ့ Liveတှကေို သုံးပွီး လိမျစားနတေဲ့ သူတှကေို သတိပေးစကားပွောလာခဲ့တဲ့ မကေဗြာ – Askstyle
သူမရဲ့ နာမညျနဲ့ Liveတှကေို သုံးပွီး လိမျစားနတေဲ့ သူတှကေို သတိပေးစကားပွောလာခဲ့တဲ့ မကေဗြာ
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော မေကဗျာကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်. ။ မေကဗျာကတော့ ” ဗိုက်ပူမ” ဗီဒီယိုကားကနေ စတင်ကာ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှု အပြည့် အဝရရှိခဲ့သူ မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်.။
ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ မင်းသမီး ပီပီ မေကဗျာကတော့ အရွယ်တင်ကာ လှပသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဆယ်ကျော်သက် အရွယ် သမီးတစ်ယောက်အမေဖြစ်ပေမယ့် လှပလွန်းသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ.။ လတ်တလောအနုပညာအလုပ်တွေ နားချိန်လေးမှာ Live Saleတွေကို မနားမနေ လုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်.။
ဒီနေ့ မှာတော့ မေကဗျာက သူမရဲ့ နာမည်နဲ့ လိမ်စားကာ အကောင့်တွေ ပေ့ခ်ျတွေ ရှိတဲ့အကြောင်းလေးကို “အချစ်တွေအလိမ်မိမှာစိုးလ်ု့ပါ ဒါကဗျာ့Page မဟုတ်ပါ ကဗျာမသုံးပါလုပ်စားနေကြတာပါ ကဗျာ့ Page အစစ်က အပြာအမှန်ခြစ်လေးပါပါတယ် မျိုးစုံကိုလိမ်စားနေကြတာပါလား ကိုဘာကိုပဲ ရိုးရိုးသားသားလုပ်စားကြပါလား သူများဖောက်ထားတဲ့ ဖြတ်လမ်းကမလိုက်ကြပါနဲ့ရှင်သတိလမ်းပေးကြတဲ့ အချစ်များကျေးဇူးပါ ။
ကဗျာခုသုံးနေတဲ့ Page အစစ်လေးပါ Like လုပ်ပေးထားပေးကြပါအုံးနော်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှု့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active world ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိ်ုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်.။
“သူမရဲ့ နာမညျနဲ့ Liveတှကေို သုံးပွီး လိမျစားနတေဲ့ သူတှကေို သတိပေးစကားပွောလာခဲ့တဲ့ မကေဗြာ”
Cele Active World ပရိသတျကွီးရေ မငျးသမီးခြော မကေဗြာကိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ. ။ မကေဗြာကတော့ ” ဗိုကျပူမ” ဗီဒီယိုကားကနေ စတငျကာ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှု အပွညျ့ အဝရရှိခဲ့သူ မငျးသမီးတဈလကျပဲဖွဈပါတယျ.။
ဇာတျရုပျတိုငျးကို သရုပျဆောငျနိုငျသူ မငျးသမီး ပီပီ မကေဗြာကတော့ အရှယျတငျကာ လှပသူ တဈယောကျဖွဈပွီး ဆယျကြျောသကျ အရှယျ သမီးတဈယောကျအမဖွေဈပမေယျ့ လှပလှနျးသူလေးလို့ ဆိုရမှာပါ.။ လတျတလောအနုပညာအလုပျတှေ နားခြိနျလေးမှာ Live Saleတှကေို မနားမနေ လုပျဆောငျနပေါသေးတယျ.။
ဒီနေ့ မှာတော့ မကေဗြာက သူမရဲ့ နာမညျနဲ့ လိမျစားကာ အကောငျ့တှေ ပခြေျ့တှေ ရှိတဲ့အကွောငျးလေးကို “အခဈြတှအေလိမျမိမှာစိုးလျု့ပါ ဒါကဗြာ့Page မဟုတျပါ ကဗြာမသုံးပါလုပျစားနကွေတာပါ ကဗြာ့ Page အစဈက အပွာအမှနျခွဈလေးပါပါတယျ မြိုးစုံကိုလိမျစားနကွေတာပါလား ကိုဘာကိုပဲ ရိုးရိုးသားသားလုပျစားကွပါလား သူမြားဖောကျထားတဲ့ ဖွတျလမျးကမလိုကျကွပါနဲ့ရှငျသတိလမျးပေးကွတဲ့ အခဈြမြားကြေးဇူးပါ ။
ကဗြာခုသုံးနတေဲ့ Page အစဈလေးပါ Like လုပျပေးထားပေးကွပါအုံးနျော” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှု့ကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ Cele Active world ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော.။